I-Oregano, eyaziwa kubantu njenge-oregano, nasezweni lesayense njenge-Origanum vulgare, ithatha indawo ebalulekile emithi yokwelapha, ngenxa yezinto eziningi zokuphulukisa. Amafutha abalulekile walesi sitshalo iwuketshezi olukhanyayo, okukhumbuza umbala kanye nephunga letiyi. Zithole kulezo zincenye zesitshalo ezingaphezu komhlaba, indlela yokuphuza izidakamizwa zamanzi. Ukusetshenziswa kwamafutha obalulekile e-oregano kuvamile ezindaweni ezinjengokwelashwa kwezikhumba ezihlukahlukene kanye nokubandayo, ukukhuluphala, ubuhlungu be-arthritic kanye nobuhlungu obuhlangene, ukuqeda ama-parasites, izifo kanye namazinyo, kanye nokugcina impilo yomuntu engqondweni.
Amafutha we-Butter ane-antiviral, antibacterial and expectorant, okwenza kube lula ukuyisebenzisa ekwelapheni kwe-bronchitis, umkhuhlane, umkhuhlane, i-ARVI nephunga eligijima. Ukwelapha izifo ezinjalo, ukugcoba nokuvuthwa kusetshenziselwa ukusiza ngokuphumelelayo izinqubo zokuvuvukala ezithinta iphethri yokuphefumula futhi zithuthukise ukususwa kwe-mucus kusuka ku-bronchi namaphaphu. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwamafutha kunconywa kubantu abahlukunyezwa yi-asthma, njengoba kusiza ukuthuthukisa nokusiza ukuphefumula. Futhi, i-oregano amafutha asetshenziselwa ukuthuthukisa ngokuvuselela izitho zangasese.
Lo mkhiqizo wemvelo wekhwalithi ephezulu usiza abantu ababhekene nezifo zesistimu yezinkokhelo. Amafutha aqakathekileko athuthukisa umsebenzi we-gallbladder, aneemiraro ze-diuretics nezakhiwo ze-diaphoretic, ngaleyo ndlela kusiza ukususwa okusheshayo kwezinto ezihlukahlukeneko ezinobungozi namathumba avela emzimbeni womuntu. Leli thuluzi linempahla elwa nokuvuvukala, ngenxa yokuthi ingasetshenziswa ngokugcwele ezifweni ezifana ne-pyelitis, i-cystitis nabanye. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yamafutha e-oregano, ukukhiqizwa kwama-enzyme kuthuthukisa, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe isimo sezinsi zomzimba. Ngenxa yalokhu, umkhiqizo uyindlela enhle yokuthuthukisa ukudla.
Namuhla, amafutha e-oregano asetshenziswe ngokujulile kuma-dietetics. Kubonakala ukuthi lo mkhiqizo uthonya kahle umzimba, okusiza ukuwohloka kwamafutha ngokushesha nokuvimbela ukukhuluphala. Amafutha e-Oregano nawo akwazi ukusiza ekuqedeni isisindo esiningi. Ukuze wenze lokhu, vele uhlanganise amaconsi ambalwa amafutha abalulekile ejamu, uju noma izithelo zezithelo. Isetshenziselwa kakhulu ukulwa nama-hemorrhoids, ama-parasites, ukuphuma kwamanzi.
Esikhathini esidlule, i-oregano yayibhekwa njengotshani kuphela besifazane, ngoba amafutha ayo nama-broths enza ukuba kube nokujwayelekile komjikelezo wesimiso, isizinda se-hormonal wesifazane, futhi kunciphise i-PMS. Ukusetshenziswa kwangaphandle kwamafutha e-oregano kunconywa ukuba i-varicose, i-eczema, i-dermatitis, ubuhlungu emajoyini nezinye izifo zesikhumba ezithathelwanayo, i-diathesis, imithi. Lo mkhiqizo wekhwalithi eliphezulu uhlangabezana ngokugcwele nama-spasms we-gastric and muscle, usetshenziswe ngempumelelo ukuvimbela izinhlobo ezahlukene zezinsizwa nokuthuthukisa ukuzivikela. Ukuze bathole ukuphumula, bavame ukusebenzisa ama-inhalation amafutha omzimba, basiza ukuqeda ukucasuka, ukucindezeleka, ukuvimbela ukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa nokubeka ubuthongo.
Izakhiwo eziwusizo ze-birch chaga
I-metabolism - isilinganiso semethamo
Ukushayela emzimbeni - izimbangela zokungahambi kahle
Ungadla kanjani ilungelo lokubukeka okuhle?
Faka uphayinaphu, utamatisi noshizi brie
Izakhiwo zokuphulukisa zamafutha wephayini amafutha
Ukwakhiwa komgwaqo omncane
Haircut "Bob", izinketho
I-Salmon ene-lime ne-cilantro
Indlela yokukhetha amacici afanele